Mpanelanelana amin'ny fanafody, mpanelanelana voajanahary, hormonina Steroid - Dumi
Manome mivantana ny benzylisop avo lenta ...
7361-61-7, mpanelanelana amin'ny fanafody Xylazine
23076-35-9, hydrochloride Xylazine
Shanghai Dumi Biotechnology Co., LTD dia manolo-tena amin'ny R&D ary famokarana vokatra simika. Miezaka izahay hanome ny vokatra sy serivisy tsara indrindra ho an'ny mpanjifa manerantany. Manana ny orinasanay manokana izahay, ny ekipanay ary ny rafitra serivisy serivisy omena anay.
Ho anay, ny toky momba ny kalitao dia ny fanolorantenanay an'ireo mpanjifantsika.
Manome toky izahay fa handalo 100% amin'ny alàlan'ny US, UK, Australia, Netherlands, Canada, France, Germany, Spain, Belzika, Sweden, Poland, Russia, Ukraine, Kazakhstan, Czech Republic, Slovakia, Portugal, ny fonosanao. Manana mpampita entana ao amin'ireny firenena / faritra ireny izahay, ary ny orinasan'ny ladoany dia manadio ny fonosanao tsy misy olana amin'ny fadin-tseranana, indraindray aza 1000 kg. Serivisy isam-baravarana. Hamarino tsara fa mahazo 100% amin'ny entana ianao. Avelao ianao hanana traikefa tsara amin'ny fahaizanay mitondra entana matanjaka.
Room J, Faritra E, 1 / F, tranobe 4, No. 358_368, Kefu Road, Jiading District, Shanghai
Ny fahafatesan'ny synthetic nataon'ny mpanohitra Parp dia afaka mametraka sela mararin'ny homamiadana
Na dia tsy mahomby aza ny Iniparib, dia niverina tany amin'ny kianjan'ny homamiadan'ny nono ireo mpanakana ny PARP rehefa avy namaky ny sakana homamiadana atodinaina
Mediam-potoana antonony – Benzylisopropylamine
Benzylisopropylamine ， Toetran'ny endrika: Kristaly mangarahara lehibe. Fepetra fitahirizana: Tehirizo ao amin'ny trano fanatobiana entana misy rivotra sy mafana. Halaviro ny afo sy ny hafanana. Tokony hotahirizina misaraka amin'ny ...
Fanasokajiana ireo mpanelanelana amin'ny fanafody
Ny mpanelanelana ara-pahasalamana dia azo zaraina ho mpanelanelana amin'ny antibiotika, mpanelanelana antipyretika ary mpitsabo mpanelanelana, mpanelanelana amin'ny rafi-pitantanana kardiojika, mpanelanelana amin'ny fitsaboana homamiadana a ...
Asidra voajanahary ho an'ny fiompiana anaty rano
Ny asidra biolojika dia manondro ireo fitambarana biolojika misy asidra. Ny asidra biolojika mahazatra indrindra dia ny asidra karboksilika, ny asidra dia avy amin'ny vondrona karboksil. Ny calcium calcium, acetic acetic, sns ... dia organika ...